सेक्स गर्दा योनीभित्रै विर्य झर्यो ? चिन्ता नलिनुहोस यसो गर्नुहोस | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
सेक्स गर्दा योनीभित्रै विर्य झर्यो ? चिन्ता नलिनुहोस यसो गर्नुहोस
उपयोगी टिप्स : मैनावारी भएर कति दिनपछी सम्भोग गर्दा गर्भ रहदैन ? थाहा पाउनुहोस्
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन ।